Warar | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha | Page 5
Ra’isul-wasaaraha oo Guddi Xaqiiqo-raadin u magacaabay eedeymaha lagu sheegay carruur loo adeegsado Basaasnimo.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Sharmarke ayaa guddi xaqiiqo raadin ah u magacaabay eedo loo jeediyay hay’addaha amniga dalka. Guddigan oo ah guddi heer wasiir ah ayaa ka kooban 4 xubnood oo kala ah. Wasiirka Wasaaradda Cadaalada Mudane Cabdullaahi Axmad Jaamac (Ilka-jiir) 2. Wasiirka Wasaaradda Arr. Gudaha iyo Federaalka Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa 3. Wasiira Wasaaradda ...
Masjid ku burburay dagaalkii ka dhacay Bosniya oo maanta dib loo furay.
Kumanaan qof ayaa ka soo qeyb galay Munaasbaadasi iyadoo ku-dhawaad Kun Saraakiil Bolis ilaalo ka hayaan Waddooyinka magaalladda of Banja Luka. Ra’isul-wasaraaha xilka ka sii degayo ee dalka Turkiga, Axmed Dafatuglu iyo Madax ka tirsan Bosniga ayaa ka qeyb galayo Dib-u-furista Masjidkaasi. 15 sanno ayey ku qaadatay Muslimiinta Bosniya sidii ay ku heli lahaayeen Fasaxa ay dib ugu dhisi lahaayeen ...
Amnesty International oo cambaareysay Go’aanka ay Kenya ku xirayso Xerooyinka Dhadhaab iyo Kakuma.
Hay’adda u dooda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty international ee ay Xarunteeda Dhexe ku taallo magaalladda London ayaa ka digtay khatarta ka soo fool leh Kumanaanka kun ee qof ee Birri-ma-geydada ah ee ku nool Xerooyinka Qaxootiga Dhadhaab iyo Kaakuma. Agaasime-gobaleedka Hay’addaasi ugu qaabilsan Bariga Afrika, Geeska iyo Harooyinka waa weyn, Muthoni Wanyeki ayaa sheegtay inuu go’aanka Dowladda Kenya muujinayo taxadir ...
Ilka-xanaf oo sheegay inuu aqbalay Go’aankii xilka looga qaaday
Avvocate Caydiid C/llaahi Ilka-xanaf ayaa hadalkaasi kaga dhawaaqay Shir Jaraa’id oo uu xalay ku qabtay Xarunta Madaxtooyadda ee Villa Somalia ee magaalladda Muqdisho. Avvocate Ilka-xanaf waxa uu faahfaahin ka bixiyey Halgankii Shaqo ee uu u soo qabtay Dadka iyo Dalka Somalia, isla markaana uu had iyo jeer u taagnaa Midnimadda Dalka Somalia. Waxa uu intaasi ku daray inuu Xilal badan ...
Kenya oo baadigoobayso rag lala xiriirinayo Daacish
Hadal-qoraal oo ka soo baxay Xafiiska Taliyaha Boliska Kenya, Joseph Boinett ayaa lagu sheegay in abaalmarin 2 million oo Shillinka Kenya, oo u dhiganta 20,000 oo Dollarka Maraykanka la siinayo qof kasta oo keena Warbixin lagu soo qaban karto Labo Dhakhtar oo lagu eedeynayo inay xiriir la leeyihiin Kooxda Daacish, Labada Nin oo magacyadooda lagu kala sheegay Faarax Dagane iyo ...
Uganda oo ka baaraan-degayso inay ciiddankeeda kala baxaan Somalia
Ciidamada Uganda oo tan iyo 2007-dii door muhiim ah ku lahaa howlgalka AMISOM ayaa iminka la qorsheynaa in laga saaro Soomaaliya sida uu baahiyay Wargeyska New Vision ee Wadankasi ka soo baxa. Dowlada Uganda ayaa imminka dib u eegis ku sameyneysa ciidamada uga qeybgalaya howlgalka AMISOM oo Soomaaliya ku sugnaa 9kii sanno ee la soo dhaafay. Afhayeenka Ciidamada Uganda kornel ...
Maleeshiyadda Daacishta Somalia oo dhaqaale iyo hub ka hela Yemen.
Agaasimihii hore ee Hay’adda Sirdoonka Puntland (PIA) oo ay Dowladda Maraykanka taageerto, Cabdi Xasan Xuseen oo la hadlay Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA-da ayaa sheegay inay Maleeshiyadda DAACISH ku kobcayaan Goballadda Puntland, isla markaana ay Taageero Dhaqaale iyo Milliteri ka helaan dalka Yemen. Waxa uu tilmaamay in tirada Kooxda Daacish lagu asaasay bishii Oktober ee sannadkii hore u dhexeysay ...
Malaysia: Muwaadin Somali oo lagu qabtay Qaad oo laga cabsi qabo in lagu fuliyo Xukun Dil ah.
Maxkamad ku taalla Degmadda Sepang ee duleedka Caasimadda dalka Malaysia ee Kuala Lampur ayaa la soo taagay Arday Somali oo Jaamacad ka dhigta dalkaasi. Ardaygaasi oo lagu maagacaabo Axmed Sahal Kahiye ayaa la sheegay in lagu qabtay isagoo tahriibinayo Qaad culayskiisu dhamaa 13 kiilo iyo 10 garaam. Eedeysanaha oo 30-jir ayaa waxaa ka muuqatay Deganaansho, markii la soo taagay Maxkamadda, ...
Guddoomiyayaasha Maxkamadaha Ciiddamadda oo la dalacsiiyey
Wareegtadda ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu xusay in Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee CQS, Liibaan Cali Yarow oo horey G/sare u ahaa, haatan laga dhigay Sarreeye Guuto. Sidoo kale, Guddoomiyaha Maxkamadda Darajadda Koowaad ee CQS, Xasan Cali Shuuto oo horey darajadiisu u ahayd G/dhexe waxaa haatan laga dhigay G/Sare ama Kolonel. Dhinaca kale, Madaxweynaha waxa uu Labadaas Sarkaal ku ...
Kenya oo kordhinayso Qunsuliyadaha ay ku leedahay Somalia
Danjiraha Kenya u jooga Somalia, Lucas Tumbo ayaa sheegay inay dhowr Qunsuliyad ka furan doonaan Somalia, si ay taasi gacan uga geysato in lala socdo dhamaan dadka Kenyanka ee ku nool gudaha Somalia. Danjiraha ayaa hadalkaasi ka yeeshay Wareysi uu Xafiiskiisa Muqdisho ku siiyey Wargeyska The Star, wuxuuna carrabka ku dhuftay inay diiwaan-geliyeen inay Somalai ku nool yihiin 20,000 oo ...